साथी कुकुर: प्रकार विशेषताहरु र चयन मापदण्ड
गार्ड, गार्ड शिकारी: शब्द "साथी कुकुर" मानिसहरू चार खुट्टे मित्र मात्र सहायक देखेर रोकियो गर्दा अपेक्षाकृत हालै हाम्रो जीवन मा आयो, वा बरु। तथापि, मानिसहरूलाई मा विश्वासी र बुद्धिमान प्राणी संग कुराकानी गर्न आवश्यकता गायब गरेको छैन।
विशेष गरी कडा प्रकृति संग संवाद को वस्तुतः devoid, यसको शहरी बासिन्दा लाग्छ। आधुनिक नागरिक त महत्त्वपूर्ण (र कहिलेकाहीं सबै महत्त्वपूर्ण छैन) छैन furiously अपरिचित भौंक कुकुर को "प्रयोगकर्ता" विशेषताहरु, को आक्रमणकारीले, पीछा संग लडाई र मासु खाने चरा हुर्काउन संलग्न। पार्क मा एक पैदल लागि लामो जाडो समुद्र तट मा एक घरमा साँझ गर्मी मा - आज, मानिस मुख्यतया सधैं उहाँलाई कम्पनी बनाउन जो एक कुकुर मित्र मा खोज्दैछ।
साथीहरू को भूमिका के नस्ल अनुकूल?
कुकुर ह्यान्डलरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (FCI) आज प्रयोगको प्रकृति भिन्न कुकुर जातिहरु को दस समूह distinguishes। नवौं समूह साथी कुकुर छन्। रक (सबै भन्दा राम्रो) ठूलो दुवै र साना, सेतो र रंग, long- र छोटो-haired हुन सक्छ। यो केवल पाहुना को विकल्प मा निर्भर गर्दछ।
साथी कुकुर को भेगका चोकहरूमा गोठालाहरूले छैनन् रक्षा गर्दैन। आफ्नो मुख्य कार्य - सधैं आफ्नो मास्टर नजिकै हुन, र उहाँलाई बेचैनी कारण छैन। कुकुर -kompanon के हुन सक्छ? प्रजाति फरक हुन सक्छ। कसैले स्मार्ट र हास्यास्पद spaniels संग खुसी छ, Labradors प्राण मा कसैले र कसैले एक Rottweiler भन्दा बढी वफादार र विश्वासी मित्र, फेला परेन सोच्छ।
दौंतरी कुकुर लागि आवश्यकताहरू
यो एक साथी कुकुर बच्चा मा जिम्मेवारी र दया को एक अर्थमा राखिदिन एक विश्वासी मित्र र सहायक, बच्चाहरु संग परिवार, आवश्यकता, असक्षम एक्लो र वृद्ध मान्छे, जन्म दिनको विश्वास छ। यो सबै सत्य हो। तर, हाम्रो विचारमा, बस तपाईं के को लागि तपाईंले प्रेम गर्ने साँचो मित्र, तपाईं सबैलाई आवश्यक छ।
अनुभव कुकुर विशेषज्ञहरु एक साथी कुकुर (मालिक उहाँको मदत आवश्यक विशेष गरी हुँदा) छान्ने, तपाईं निम्न विशेषताहरु ध्यान गर्नुपर्छ भनेर विश्वास:
मर्मतका र हेरविचार सजिलो;
खाना मा सादगी;
तपाईं ठूलो र मध्यम आकर्षित छ भने यी सूचकहरू सान्दर्भिक छन् नस्ल साथी कुकुर। सजावटी तिनीहरूलाई हेरचाह गर्न सधैं सजिलो छ बाहेक बच्चाहरु, कुनै फरक शारीरिक धीरज छन्। साथी कुकुर सानो जातिहरु - यो मुख्य आराम आफ्नो काखमा ensconced आफ्नो साँझ अप रोशन भनेर, आफ्नो साँझ पैदल मा तपाईं साथ दिनु हुनेछ पाल्तु जनावर हो।
तर हरेक को लागि कि भूल छैन (पनि सानो) एक प्रारम्भिक उमेर देखि प्रशिक्षण र शिक्षा आवश्यक छ। हामी कुकुर ह्यान्डलरहरूको यो मुख्य नियम बेवास्ता भने, आफ्नो राम्रो पाल्तु जनावर एक मुश्किल र दाबीले पशु हुन्छन्।
साथीहरू - त्यसैले कुकुर को के जातिहरु हेर्न गरौं? शायद किनकी विवरण को, तपाईं आफ्नो चार-खुट्टे मित्र चयन गर्न सक्षम हुनेछ।
साथी कुकुर: अपार्टमेन्ट लागि नस्ल
तिनीहरूले पाल्तु जनावर हुन, र आफ्नो विचार (र व्यवहार) पाहुना खुसी पार्न मात्र डिजाइन गर्दै छन् सानो जातिहरु प्रतिनिधिको छन्। आज यी पशुहरू धेरै। यहाँ तिनीहरूलाई केही छन्।
यो आकर्षक भालु, फोटो जो तपाईं तल हेर्न सक्नुहुन्छ लोकप्रिय सजावटी कुकुर को एक। मध्य युग मा एक Pomeranian को धेरै reminiscent देखिन्छ कि पशु वर्णन गरिएको छ। को XVIII सताब्दी मा यी पशुहरू (विवरण अनुसार) ठूलो आकार मा आधुनिक चरा फरक छन्। आफ्नो वजन 13 किलो पुगेको छ।
प्रजनन थप प्रजनन मात्र सानो जनावर अनुमति छन्। त्यसैले, बिस्तारै, नस्ल थप diminutive आकार बन्ने भएको छ। 3.5 किलो र 3.5 किलो सम्म - 1896 मा, Pomeranian दुई वजन विभाग पहिचान एउटा छुट्टै नस्ल, रूपमा गठन भएको थियो।
Pomeranian - कुकुर कस वर्ग ढाँचामा, जोडेको संकुचित। शरीर मा Spitz गहिरो छाती र गोलाकार किनाराको संग, छोटो छ। यो रसीला बाक्लो कपाल, स्पर्श गर्न एक सानो कठोर ढाकिएको छ। कुकुर सजिलै एक साथी को भूमिका सामना गर्न सक्छन् Spitz, शान्त प्रकृति, आफ्नो मास्टर, आक्रामक छैन धेरै मायालु छ।
यसको diminutive आकार तापनि साथी कुकुर नस्ल bichon Frize - एकदम बलियो पशु छ। आफ्नो परिवार धेरै जवान छोराछोरीलाई छ भने, तिनीहरूले आवश्यकता ध्यानपूर्वक यी आकर्षक कुकुर सम्हाल्न कसरी व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
बच्चाहरुका लागि अद्भुत साथीहरू Bichons। तिनीहरूले बच्चाहरु अन्त मा घन्टा को लागि खेल्न सक्छ, धेरै चंचल र आनन्द हो।
र बच्चाहरु को लागि यस्तो मजा साथीहरू पाउन कठिन छन्। Pugs धेरै अन्य भन्दा बलियो हो सानो जात कुकुर। तिनीहरूले धेरै साहसी र स्मार्ट छन्। साना बच्चाहरु को लागि पनि गार्ड बन्न सक्छ। र वयस्कहरूको लागि, यो हो कता कोमल दयालु र संवेदनशील प्राणीहरू छ।
मध्यम आकार को पशु
थप दुई भन्दा सय प्रतिनिधिको नम्बर एक एकदम ठूलो समूह, - एक मध्यम जातिहरु को कुकुर। हामी यो ससर्त श्रेणी भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई जो समान मापदण्डहरू छन् विभिन्न वर्गहरू, प्रतिनिधिहरूलाई हुन्छन्। यी पशुहरू को वजन 25 किलो भन्दा बढी हुँदैन, र उचाइ - 57 सेमी।
यो कुकुर हरेक मालिक प्रेम हुनेछ। मध्यम Schnauzer, उत्कृष्ट क्षमता द्वारा विशेषता छ चाँडै र सजिलै प्रशिक्षित गर्न परिवार सबै सदस्यहरु संग राम्रो साथ हुन्छ। यो जनावर उहाँले लगभग कुनै बहाउन थियो भन्ने तथ्यलाई द्वारा आकर्षक छ। तपाईं वस्त्र र असबाब मा एक बाल छैन पाउनुहुनेछ। हेरविचार को जटिलता मात्र नियमित (दुई पटक एक वर्ष) trimming छ।
Schnauzer दिन कहिल्यै अयोग्य प्रतिक्रिया एक स्वस्थ स्नायु प्रणाली फरक। Schnauzer स्पष्ट अपरिचित आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले warily छन् भेद।
र यो बहुमुखी कुकुर मा घन्टा को लागि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हालैका वर्षहरूमा साथी कुकुर नस्ल लैब्राडोर विशेष लोकप्रिय छ। त्यो आफ्नो काम लागू गुणहरू नेत्रहीन बिगडा सँगसँगै, स्मार्ट छ। यो दबाइ अनुसन्धान को लागि, भन्सार मा प्रयोग गरिन्छ।
यो जनावर कुकुर को सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू अवशोषित छ। यो स्थिर psyche, लचिलो प्रकृति, मुनासिप होइन आक्रमण को अभाव, दया। कुकुर सबैलाई घर सक्छन् राख्नुहोस्। ख्याल यो unpretentious छ आहार मा न्यूनतम आवश्यक हुनेछ।
ऊर्जावान लैब्राडोर सक्रिय चल्छ आवश्यक छ। यी पशुहरू को प्रशिक्षण, पनि शुरुआती कुकुर प्रजनकों लागि कठिनाइ उत्पन्न छैन तीन सय वाक्यांश सम्म अवशोषित गर्न सक्षम छन्, मानिस बताए।
निश्चय संग ठूलो नस्ल कुकुर को मालिक एक ठूलो जनावर सामग्रीहरू धेरै लाभ छ भन्छन्। ठूलो कुकुर राम्रो थाहा "मजाक" को प्रशंसक discourages जो धेरै प्रभावशाली उपस्थिति, छ। ठूलो कुकुर बरु तिनीहरूलाई घनिष्ठ मान्छे, अपरिचित को wary, तिनीहरूले कोमल र प्रेमको epitome छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद। ठूलो कुकुर - पैदल यात्रा को लागि एक ठूलो साथी, पैदल, दौडना संयुक्त।
यसलाई कसैले अज्ञात कि असम्भाव्य छ साथी कुकुर जर्मन प्रकार गोठाला। यो, बहुमुखी शारीरिक रूपमा बलियो र बौद्धिक पशु। यसको क्षमताहरु छैन overemphasized गर्न सकिन्छ। जर्मन शेफर्ड बच्चाहरु संग परिवार को लागि एक उत्कृष्ट छनौट हो। साथै, यो रूपमा जवान र सक्रिय र वृद्ध दम्पतीले प्रेम गर्नेहरूका लागि, लागि उपयुक्त छ एक साँझ टहलने पार्क मा।
यी कुकुर सानो शहरी अपार्टमेन्ट र ग्रामीण फारमहरु मा सहज लाग्छ। मात्र कुरा के तपाईं मालिक सम्झना गर्न आवश्यक - यो कुकुर श्रृंखला वा पिंजरे मा जीवन को लागि बनेको थिएन। त्यो नितान्त प्रेम र ध्यान आवश्यक छ। र त्यो सही रकम तिनीहरूलाई हुन्छ भने - समर्पित पशु तपाईं फेला हुनेछ।
र यी रातो सुंदरियों ठूलो humorists मात्र होइन, ठूलो ऊर्जा संग endowed, तर पनि चतुर छन्। सिद्ध साथी - तपाईं यो कुकुर संग केही घण्टा खर्च गर्न हुन भने, तपाईं आइरिस सेटर भनेर बुझ्न हुनेछ।
मूलतः यो नस्ल एक शिकार कुकुर को उत्साह र ऊर्जा बाँचे शिकार रूपमा उत्पादन, त्यसैले आज यो जनावर छ। सबै भन्दा राम्रो कुरा यो सुन्दर पुरुष लागि - - यो घेरने नयाँ सबै सिक्न उहाँले धेरै उत्सुक छ। यो सिर्फ यति आइरिस सेटर राष्ट्रपति, संसारमा तारा र साधारण मानिसहरूको मनपर्ने भएको छ कि भयो। यो साथी कुकुर धेरै वर्ष को लागि आफ्नो स्थिर साथी हुनेछ।
पीकार्डी गोठाला: इतिहास, वर्णन, वर्ण र हेरविचार
बुलडग: नस्ल को विवरण
बिरालोहरु मा Toxoplasmosis: यो खतरनाक छ?
फोटो र विवरण संग प्रजातिहरू spaniels
एक सुगा Corella भन्न सुझाव मालिक कसरी सिकाउन
एक रूबिक गरेको घन 2x2 कसरी इकट्ठा गर्न। अल्गोरिदम विधानसभा रूबिक गरेको घन 2x2
विशेष पाक सहायक - मासु लागि सिरिंज। फरक के छ?
तिब्बती नस्ल Shih Tzu - कुकुर, जसको आँखा गिरावट
पुस्तिका, विशेषज्ञ सल्लाह: पार्किङ सेन्सर कसरी स्थापना गर्न
फाइदा र बाहिरी विज्ञापन को बुरा
शेवरलेट स्पार्क - सानो शहर कार
सस्तो छुट्टी लेक Baikal मा: पर्यटन, मनोरञ्जन केन्द्र र निजी क्षेत्र
गत्ता बक्स रूपमा सजिलो तरिका बनाउने?
बाटोमा निरर्थक दुर्घटना जोगिन मदत गर्न चार नियमहरू
घर मा स्तन पंप कसरी जीवाणु रहित बनाउनु गर्न?
चीन को महान पर्खाल: रोचक तथ्य र निर्माण को इतिहास